Gaadiidka Dadweynaha ee Bursa wuxuu lamid noqon doonaa sidii hore! RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGaadiidka Mass ee Magaalada Bursa, Kaas Oo Sababay Ceebta, Ma Noqon Doono sidii Odayga
Gaadiidka Mass ee Magaalada Bursa, Kaas Oo Sababay Ceebta, Ma Noqon Doono sidii Odayga
19 / 05 / 2020 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, taraamka
Gaadiidka tirada badan ee ay ku dhacday cudurka faafa ee Bursa ma noqon doonto sidii hore oo kale.
Maareeyaha guud ee shirkadda Burulaş Kürşat Çapar, oo la wadaagay xogta naxdinta leh ee ku saabsan gaadiidka dadweynaha ee ay ku dhacday duufaanta, ayaa sheegay in tirada rakaabka ay hoos u dhacday boqolkiiba 85. Isagoo sheegay in sharciga 50% ee awooda rakaabka uusan aheyn mid waara, ayuu calledapar ugu yeeray muwaadin: "Si aan ula shaqeyno 50% awooda rakaabka, waxaan u baahanahay inaan iibsano 800 oo gaadiid oo dheeraad ah. Tani waxay ka dhigan tahay maalgalin 500 milyan oo liras ah. Waxaan rajeyneynaa muwaadinku inuu si xasaasi ah u ogaado doorashada saacadaha iyo wadiiqada. Muddada qof kastaa bilaabayo inuu shaqeeyo 9-ka subaxnimo kuna dhammaado 5 fiidnimo waa in laga hadhaa. ”
Isagoo tilmaamaya in Golaha Magaala-weyn la rajeynayo inay ku kulmaan qandaraaska 'T2 Tram Line', kaas oo dhismihiisu socdo, Çapar wuxuu sidoo kale la wadaagay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan ciriiriga taraafikada iyo tillaabooyinka kaydka: “Waxaan bixinay boqolkiiba 15 qulqulka taraafikada taabasho yar. Anaga oo iibinayna diyaaradaha, waxaan soo ceshanay 11 milyan oo liisi ah sanadkiiba waxaanan siinay 7 milyan oo lacag ah. Waxaan u adeegsanay adeegyadan inay deggeneyaasha Bursa ay aad ugu baahan yihiin kuwa taabta muwaadiniinta badankood. ”
Maareeyaha Guud ee Burulaş Kürşat Çapar wuxuu martida u ahaa wareysigii Isniinta toddobaadkan.
Sidee bay shaqaalaha Burulaş uga adkaadaan geeddi-socodka faafa?
Sidee gaadiidka dadweynaha u saameeyeen cudurka faafa?
Jidadka taraafikada ee magaalada Bursa?
Sidee xaaladdu dhaqaale tahay?
Meeqa heerkee ah shaqada shaqada?
Goorma ayey kordhayaan awooda rakaabka?
Goorma ayaa la bilaabi doonaa khadka T2?
Basaska yar-yar miyaa loo rogi doonaa basas?
Ma jiraan socod socod socda?
Mustafa Özdal oo ka socda Wargayska Olay weydiyay, Çapar ayaa ku jawaabay.
"WAA IN AY KA SAMEEYAA SHAQADA SHAQADA EE SHAQADA"
Are Sidee ayay tahay maalmihii cudurka faafa? Ma u shaqo tagtaa maalin walba?
Cudurka faafa waa dhibaato culus. Hawshan, waxaan uga soo baxnay nidaam joogto ah. Gaadiidka dadweynaha waa mid ka mid ah meelaha ugu halista badan. Khatarta shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa la ogyahay, laakiin ganacsatada iyo shaqaalaha ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha ayaa ah kooxda ugu halista badan. Taasi waa sababta aan u hirgalinay talaabooyin karantiil iyo ka hortag ah. Kuwaas ka sokow, annaga oo ah Burulaş, waxaan u wareegnay gunnooyin gaagaaban oo waqti-gaaban ah, si aanaan u soo gelin dad badan oo aan lacag u keydsanno. Saddex meelood hal meel shaqaalaha waxay fasax ku jiraan 10 maalmood. Tani waxay naga dhigtay inaan helno shaqaale beddela. Oo waxaan u imid inaan shaqeeyo maalin kasta sababta oo ah waxaan maareeyaa kooxda heesaha.
“NAMBARKA NATIIJADA AYUU KA DHACAY, LAGU SAMEEYIN MAROODAHA”
► Sidee bay u saamaysay gaadiidkii dadweynaha ee Bursa in uu cudurku fido? Miyaad na siin kartaa macluumaad ku saabsan heerka deganaanshaha?
Waxaa jira dhimis rakaab oo ka badan 85 boqolkiiba. Markaa khasaare weyn ayaa na soo gaadhay. Waxaan ku jirnaa bartilmaameedka cabirka ilaalinta fogaanta bulshada. Sidaa darteed, ma jirin wax sidan oo kale ah oo hoos loogu dhigay duullimaadyadeenna boqolkiiba 85.
Passengers Rakaabkii ugu badnaa miyay basas soo galeen ama Bursaray?
Ma jiraan kala duwanaansho weyn. Waxay ka dhacday 280 kun ilaa 50 kun magaalada Bursaray. Waxaa jira waxoogaa hoos u dhac ah baska.
Waxaa la saadaalinayaa in ka dib dillaaca ka dib, dhaqankeennii hore ay isbeddelayaan. Tusaale ahaan, waxaan ka fogaan doonaa deegaannada buuq badan. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira fikir ah in dadku aysan doorbidi doonin gaadiidka dadweynaha in muddo ah. Ma raacsan tahay?
Waxaan la kulannaa maalmahan. Waxaan ku jirnaa nolol dhaqaale iyo bulsho oo aan xaddidanayn oo waxaan aragnaa in dadku adeegsadaan gawaaridooda gaarka ah marka loo eego kuwii hore. Tani way sii socon doontaa, laakiin sida noloshu caadi u tahay, tirada rakaabka ayaa waxyar kordheysa. Markaan gaarno lambarradii hore, ma jiraan qalab ku filan iyo shaqaale ku filan. Sidoo kale ma rabno inaan gaarno tirada rakaabka duugga ah. Sababta oo ah waxaa nagu adkaata inaan bixinno adeeg aamin ah.
"WAA WAAYEYNAAN TRAFFIC 15 SAAR"
You Ma haysaa wax macno leh oo macno leh marka aad isbarbar dhigtaan isku socodka baabuurta ee Bursa iyo sanadihii hore?
Waxaan ku cabbiraa nidaamkayga. Waqtiga safarka ee khadka khadka ayaa sidoo kale tilmaan u ah ciriiriga taraafikada. Dardar-gelinta inta lagu gudajiro xilliga cudurka faafa inta lagu jiro xilliyada safarka. Tani waxay muujineysaa in taraafikada si dhaqso leh ay u qulqulaan. Marka la barbardhigo 3 sano ka hor, waxaan gaarnay koror aad u daran xilliyada dalxiiska Markii ugu horreysay ee aan nimid, waxaan aragnay in safarradayadii, oo qaatay 1 saac iyo 10 daqiiqo, ay ka yaraadeen 50 daqiiqo. Taabasho yar, ka saarida jasiiradaha wareega, fidinta dariiqyada Acemler waxay horseedeen hoos u dhac ku yimaada xilliyada dalxiiska inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya. Gaadiidka ayaa qiyaastii ahaa 10,15 boqolkiiba qulqulaya.
"Waxaan soo iibinay hawada, la badbaadiyey oo la adeegay"
Situation Waa maxay xaaladda dhaqaale ee Bursaray iyo basaska? Waxyeello ma ku geysaneysaa gaadiidka dadweynaha?
Gaadiidka dadweynaha ma ahan goob leh lacag fara badan. Safarka kiiloo kiiloo mitir ee shirkadda basaska waa 1,2 heer. Hagaag, waxaa jira rakaab badan subaxdii, laakiin sidoo kale waxaa jira rakaab aad u yar. Waxaan leenahay culeys dhaqaale oo daran inta lagu gudajiro tirada rakaabka tirada yar Waxaan ku dheelitirnay qaar ka mid ah culeyskaan Dakhliga Bursaray iyo howlo kale, runti waxaan heysanaa shirkad dejisay isku-dheelitirka bixinta. Safarka bilaashka ah sidoo kale waxaa kabiya degmada. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira torsion oo lagu dubay saliidiisa laakiin sameysa maalgelin aad u muhiim ah. 150 milyan oo rodol oo ah saxiixa iyo faalista ayaa sidoo kale lagu sameeyaa kheyraadka Burulaş. Waxaan ku bixinay wixii aan ka helnay diyaaradaha aan ka iibinay Bursa. Waxaa sidoo kale la muujiyay sida saxda ah ee aan go'aan u gaarnay. Marka aan ka hawlgalno gaadiid badan, waxaan ilaalinaynaa masaafada bulshada waxaanan ka ilaalinaa muwaadinka khataraha. Waxaan sidoo kale bedelnay dhammaan wiishkii Bursaray. Waxaan soo iibsanay in kabadan 50 gawaarida cusub oo leh nambarkayaga 20 gaari ayaa imaan doona bisha Juun. Waxaan ku iibsaneynaa 70 gawaarida oo leh sinnaanteena. Sidaas awgeed, Burulaş waxay leedahay qaab ay ku kobcin karto duulimaadyadeeda, kordhin karto awooddeeda, oo ay ku gaari karto shaqada casriyeynta iyo joogtaynta isu-dheellitirka kharashka. Laakiin nidaamka Covid-19 wuxuu abuuray curyaannimo daran.
Mentioned Waxaad sheegatay iibinta diyaaradaha ay leedahay shirkadda Burulaş. Immisa ayay iibintaasi kaydsadeen?
Iibinta diyaaradaha ayaa lahaa labo faa iido. Inaad ka takhalusto burburka sanadlaha ah oo aad kheyraad hesho. Anaga oo iibinayna diyaaradaha, waxaan soo ceshanay 2 milyan oo liisi ah sanadkiiba waxaanan siinay 11 milyan oo lacag ah. Waxaan u adeegsanay adeegyadan inay deggeneyaasha Bursa ay aad ugu baahan yihiin kuwa taabta muwaadiniinta badankood.
“SAXIIXA WAA LAGU SAMEEYAA”
Marxaladee ayaa lagu aadayaa daraasadaha diiwaan gelinta ee Bursaray? Goorma ayaa awooda rakaabka la kordhin doonaa?
Hawlgallada goynta xargaha ayaa la dhammeystirey. Kulannada qalabka ayaa la sameeyaa. Xaqiiqda ah in shirkada qandaraaslaha ay asal ahaan ka soo jeedo Jarmalka ay sababtay shaqo xumo maxaa yeelay waxaan ku jirnaa nidaamka faafa. Laakiin ugu dambeyntii, waxaan sameynay imtixaanka aqbalitaanka warshad. Waxaan sidoo kale xaqiiqsannay jilicsanaanta 2 bedel. Qorshayaashayadu waxay ahayd kordhinta awoodda bisha Sebtember iyo in aan socodsiino gaadiid badan maalinta ugu horeysa ee iskuulada la furi doono. Laakiin waxaa laga yaabaa inay xoogaa ruxmaan.
"T2 HALKAAN BAARITAANKA HADDII HADDII AQOONSIGU FURO"
Duqa Magaaladda Caabudwaaq Alinur Aktaş wuxuu yiri inay xalliyeen dhibaatada maaliyadeed bayaankoodii ugu dambeeyay ee la xiriira T2 Tram Line. Waa maxay xaaladdii ugu dambeysay ee khadka T2-da oo aan sanado dhammeyn?
Arintaani waxoogaa yar ayey ku tahay qeybta Waaxda Gaadiidka. Dadaalka Mudane Madaxweyne, hal qodob ayaa lagu gaadhay heshiiska amaahda. Si kastaba ha noqotee, shirarka Golaha Magaala-weyn ma sii wadi karaan cudurka daacuunka dartiis. Waxaa jiray dib u dhacyo labadaba halkan iyo shirkadaha amaahda ah. Kadib marka heshiiska amaahda la sameeyo, hindisada ayaa isla markiiba la samayn karaa. Waxaan diyaar u nahay.
Ak Madaxweyne Aktaş wuxuu ugu yeeray dukaanleyda basaska yar yar inay gawaaridooda dusha saaraan baska, laakiin basasku si diiran ayey ugu qaateen. Mawduucan ma ajandaha baa ka taagan?
Wicitaankani ma aha wicitaan la soo afjarayo. Wakhtiyo ayaa jira waraysiyo. Ganacsadayaashu uma muuqdaan kuwo diiran maxaa yeelay waxay leeyihiin mudnaan hoos timaada damaanada sharciga. Laakiin waqtigu wuu beddelaa xeerarka ciyaarta. Marka tani maahan shaqo aan quusan doonno. Waxaan ku sii wadi doonnaa daraasadahaheena gaadiid aad u raaxo badan iyo casri.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaa mamnuuc ka ahaa in lagu qaado rakaabka taagan. Si kastaba ha noqotee, maanta, waxaan markhaati ka nahay in basasku ay ka buuxaan basas, iska daa rakaabku saacadaha qaarkood? Maxaa loo oggol yahay tan?
Hadda tani waa arrin dhaqaale oo ka sarreysa dhammaan. Bambooyinku wali waa mamnuuc inay qaadaan rakaabka taagan. Ma jiro tanaasul. Laakiin basaska gaarka loo leeyahay iyo basaska kale waxay leeyihiin rakaab taagan oo leh awood. Marka la eego baaxadda cabirrada 'Covid-19', waxaad u adeegsankartaa boqolkiiba 50 awoodda aad ku wareejisan tahay wareegtada Wasaaradda Gudaha. Muwaadiniintu way fahmaan kala bar tirada kuraasta. Laakiin waad qaadi kartaa kala badh awooda rakaabka, ma ahan kuraasta kala bar. Tusaale ahaan, awooda rakaabka ee ah 12 mitir baabuur ee shatiga ku jira waa 98. Markaa gaarigan wuxuu qaadi karaa 49 rakaab ah. Qaadashada nus ka mid ah rakaab badan ma sii jiri karto. Waxaa jira 3 aragtiyo raaxo leh oo la xiriira gaadiidka dadweynaha. Mid, muddada. Markaa gaarigu wuu kacaa daqiiqad kasta. Laba qiime. Saddexda dhammaantoodba way jajaban yihiin. Dabcan, sicirka qiimaha wuxuu xoojinayaa sicirka ciriiriga. Haddii aad qiimaha aad u hooseyso, waxaad kordhin doontaa adkeynta xoogaa kadib. Hadda waxaan isku dayeynaa inaan soo qaadno dhammaan 3-da mitir meesha ugu habboon. Hadafkayagu waa inaan ka dhigno nidaamka tareenka mid laf dhabarta iyo bixinta gaadiid ka raaxo badan. Waxaan kordhinay soo noqnoqoshada safarada. Dadku waxay sugaan 12, 13 daqiiqo, maadaama ay sugi doonto nus-saac. Sikastaba, dhibaatooyin farsamo ayaa imaan kara waqti ka waqti. Waxaan filaynaa rakaabka inuu muujiyo ficil celin dheeraad ah. Haddii gaariga soo gala uu halis ugu jiro caafimaadka, waa inay sugaan gaariga kale. Waxaa jira tareen 4-tii daqiiqaba fiidnimo galabta gudaheeda Bursaray, laakiin mid ka mid ah boorsooyinka gaariga, kuwa kale way madhan yihiin. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah gaariga qaaliga ah waa gaariga ugu dhow jaranjarada. Muwaadinku wuxuu halis gelinayaa caafimaadka naftiisa iyo dadka kaleba isagoo aan lugayn ama waraniga ka fogeyn jaranjarada. Waxaan fileynaa muwaadinku inuu badalo dhaqankiisa. Sababtoo ah fursad uma lihin inaan sii wadno caadooyinkeenii hore. Ma jirto il ay ku noolaato sidii hore. Annagu ma lihin raaxo aan haysano bas 2 dabaq leh, mid madhan, kan kalena shaqeeya. Waxaan leenahay 800 oo gaadiid dadweyne oo ku safraya magaalada. Si aan ula shaqeyno 50% awooda rakaabka, waxaan u baahanahay inaan iibsano 800 oo gaadiid oo dheeraad ah. Tani waxay ka dhigan tahay maalgalin 500 milyan oo liras ah. Ma maalgelin karno. Sidoo kale, markii noloshu caadi ku soo noqoto, 800-kaan gawaaridood waxay noqon doonaan kuwo aan shaqeyn. Sidaa darteed, waxaan fileynaa muwaadinku inuu si xasaasi ah u ogaado saacadda iyo wadiiqada. Muddada uu qof walba shaqada billaabayo 9-ka subaxnimo oo ay ku dhammaato 5-ta galabnimo waa in looga hadhaa. Saacadaha shaqada waa in loo qaybiyo. Laakiin markasta waxaan raadinaa xalka annaga oo weydiinayna maamulka gaadiidka dadweynaha in ay bas dhigaan.
You Ma u isticmaashaa gaadiidka dadweynaha si aad u aragto xaaladda baabuurta gaadiidka dadweynaha ee Bursa?
Waxaan u isticmaalaa marar badan. Waxaan bilaabay maalin ka hor Covid-19 anigoo fuushan gaadiidka dadweynaha.
"Waxaan u xulanay 10 boqolkiiba xaddiga ugu badan ee muwaadiniinta"
There Miyey jiraan wax kor u kaca gaadiidka dadweynaha maalmaha soo socda daqliga soo gala awgeed?
Waxaan ku nool nahay wadan ay jirto sicir barar gaar ah. Waxaad leedahay koror kharash. Laakiin waxaan isku dayeynaa inaan tan uga dhigno ugu yaraan muwaadiniinta. Tan iyo markii aan bilownay inaan la shaqeyno Madaxweynaha Caalin, sicirkayaga guud ee kororka ah waa boqolkiiba 55. Waxaan ka tarjumnay kaliya 10 boqolkiiba tan shacabka. Maalintii aan shaqo bilawnay, dakhligeenii halkii rakaab ah wuxuu ahaa 1 lira 69 kurus. Waan wadnaa, 1 rodol ayaa yimid heerka 82 senti. Laakiin waxaan leenahay kharashkiiba 2 lira 50 kurus halkii rakaab ahba. Waxaan haysannaa 182 senti. Waxaan go'aansanay inaan ka jareyno kuwa isticmaala nidaamka si lacag la’aan ah kuwa bixiya nidaamka. Haddii aan samayn lahayn wax ka soo horjeedda, waxaan ka qaylin lahayn boorso. Kaalmada safarka ee bilaashka ah waxaa daboolaya miisaaniyadda dowladda hoose. Qiyaastii 40-45 milyan lira oo ah lacagaha ayaa laga wareejiyaa khasnadaha dawladda hoose ee Magaalo-weyne sanad walba si loogu helo kabitaan.
Dejinta Corona ee Suuqyada Suuqa ..! Waxba Ma Noqon doonaan Sidii Hore
Wasiirka Arimaha Gudaha: "Waddamadeenu Daacad uma Yihiin"
Duqa magaaladda Uysal: "Waxyaabaha ka soo baxa moobiilladu ma socon doonaan ilaa sannadka 5-6"
Ma jiri doonto waqti xaddidan Ankara
Warshadaha Soo Saarida Gawaarida Turkiga ayaa yareynaya waxsoosaarka Cudurka Shuban Biyoodka Sababta!
Pulse Hit Masar Soo Dhaafisay Wagon
BursaRay mashruuca tallaabada bari ee saameynta culus
Hit by Railway ee Hicaz
Wadarta 19 cabir
19 Maajo Socdaal Baaskiil oo laga keenay Madaxweyne Soyer
Marmarayın walaalahaa Thames ugu da 'weyn, Seikan ugu qoto dheer
Haydarpaşa Station ma noqon doonto hudheel (Video)